के दिन्छौ मलाई भ्यालेन्टाइन गिफ्ट? | Suvadin !
प्लीज, मेरा लागि भ्यालेन्टाइन गिफ्टको रुपमा त्यो चिज देऊ जस्ले गर्दा मेरो परिवार स्वर्गजस्तै सुन्दर बनोस्। तिम्रो भ्यालेन्टाइन गिफ्टले म आफूलाई एउटा नारी भएकोमा गर्व गर्न सकुँ। के सक्छौ दिन? मलाई बालापन झुल्कने खेलौना चाहिँदैन, मलाई मुखै रसाउने मिठाई चाहिँदैन, नक्कल पार्ने गरगहना र साडी चाहिँदैन। बस एउटा आशा गरेको छु, मलाई मेरा सासु–ससुरा देऊ। गाउँमा दस नंग्रा खियाएर तिमीलाई हुर्काएकी आमा अनि तिम्रा लागि आफ्नो पसिना बेचेका तिम्रा बा ल्याएर देऊ। म पनि सासु–ससुरा पालेकी असल बुहारी बन्न चाहन्छु। सक्छौ दिन?
Feb 13, 2017 11:47
41.4k00
Shared: 18.1k times | Share this on
अलि अगाडि बढे पनि उस्तै मेला छ भ्यालेन्टाइन डे को। अझ मनै लोभ्याउने गरी फेसबुकका भित्ता रंगिएका छन्। कहिले कुन डे, अनि कहिले कुन डे। भ्यालेन्टाइन डेको एक साता हरेक दिनले मन लोभ्याउँछ। तर ... तर म रमाउन सक्दिनँ। किनभने मेरो आफ्नै परिवेश छ। म अरुको संस्कारमा खुलेर रमाउन सक्दिनँ। हो, मन जित्छन् यी पर्वले तर मनाउनैपर्छ भन्ने मान्दिनँ।
मेरो भेलिन्टाइन, तिमी मलाई संसारका खुसीहरू मेरो पोल्टाभरि खन्याउन चाहन्छौ नि है? तिमीलाई थाहा छ? म खुसी कति बेला हुन्छु? अब मलाई लाखौं पर्ने उपहार अमूल्य निर्जीव वस्तु होइन, सजीवता देऊ मेरो खुसी देऊ, मलाई मेरो परिवार देऊ, बाबा दाजुभाइको छहारी देऊ, मलाई बुहारी होइन, छोरी भनेर माया गर्ने, दुःख–पीडा पर्दा बिसाउने चौतारी, सासु आमा देऊ, मेरी सासुलाई आमाजस्तै माया गरेर दुःख पर्दा रुन सक्ने काख देऊ। खÞुसी हुँदा हाँस्न सक्ने वातवरण देऊ, आमा रुँदा हँसाउन सक्ने शक्ति देऊ। आमा खुसी हुँदा सँगै मुस्कुराउ, पीडा हुँदा मल्हम लगाउन सकुँ। जीवनको अन्तिम घडीमा काँध थापेर स्वर्ग जाने बाटो खुलाउन सकँु। यही वातवरणको सिर्जना गरिदेऊ। यो नै जीवन्त उपहार हुनेछ।
गाउँमा दस नंग्रा खियाएर तिमीलाई हुर्काएकी आमा अनि तिम्रा लागि आफ्नो पसिना बेचेका तिम्रा बा ल्याएर देऊ। म पनि सासु–ससुरा पालेकी असल बुहारी बन्न चाहन्छु। सक्छौ दिन?
म उहाँहरूबाट टाढिएर सुखी छु तर खुसी छैन। म दुःख गर्न सक्छु तर दुःखमा पनि खुसी हुन सकुँ। जन्मदिने बा–आमालाई दःुखमा राखेर बुहारी खुसी पार्ने तिम्रो रहर कहिले नपलाओस्। सक्छौ भने भ्यालेन्टाइन डेको गिफ्टस्वरुप आजै मलाई मेरा सासु–ससुरा देऊ, जसको सेवाले म आफूलाई संस्कारी नारी भनेर चिनाउन पाऊँ। हो प्रिय! मलाई मेरा सासु–ससुरा देऊ, यो भ्यालेन्टाइन गिफ्ट स्वरुप।